Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland oo si guud ugu baroordiiqday dadkii ku dhintay Qarxii Tiyaatarka Qaranka Soomaaliya(+Sawiiro) | Somali Information Center
« Madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya oo sheegay inay Magacaabayaan Guddi Wadahadallo la fura Somaliland ..
Wasiirka Caafimaadka Ee Somaliland Oo Sheegay In Cusbitaalka Hargeysi Uu Taagan Yahay Halkii Ugu Fiicnayd Tan iyo Xiligii Ingiriiska »
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland oo si guud ugu baroordiiqday dadkii ku dhintay Qarxii Tiyaatarka Qaranka Soomaaliya(+Sawiiro) April 10, 2012 Helsinki:(SIC)-Guud ahaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland, ayaa taci tiiraanyasan hawada u marinaya dhamaan dadkii ku naf waayay Qaraxii 4..4.2012 Muqdisho xarunta dhaqanka iyo mada,daaladda ee Natoinal-Teater oo ay ka mid ahaa yeen Allaha u naxariistee guddoomiyihii Olympikada Soomaaliyeed Marxuun Aadan Xaaji Yabaroo (Wiikh) iyo Guddoomiyaha xiriirka Kubadda cagta Soomaliya, Marxuun Siciid Mugaanbo iyo sidoo kale Marxuun, Xildhibaan Mowliid Macaane . Waxaana leenahay Inaali-laahi wa innaa illayhi raajicuun , Illaahay samir iyo iimaan hanaga siiyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Qosyaskii ay ka tageen iyo qaraabadoodii. Aamiin Illaahoow naga aqbal.
Dhinaca kale Xafladdo loogu barood diiqayo dilki loo gaystay Madaxda Sporska Soomaaliya ayaa lagu qabtay Magaaladda Helsinki iyadoo ay soo agaasimeen ururada Somali Culture and Sports iyo Somali Youth Kanava iyadoo xafladdaasi lagu qabatay labo meelood oo isla magaaladda Helsinki ah.
Guddoomiyaha ururka dhaqanka iyo Spotska Soomaaliya, Mudane Axmed Maxamuud Imad ayaa ka hadlay u jeeda xafladdan , isagoo sheegay in Sportska Soomaaliya uu galay Mugdi maadaama buuyi yiri ay geeriyoodeen raggii qibradda u lahaa hoggaaminta hay,addaasi .
Dhinaca kale guddoomiya ayaa canbaareeyay falkaasi foosha xun, laguna dilay madaxdii Olympicada Soomaaliya. Waxaan tacsi u dirayaa dhaaman shacbka Soomaaliyeed iyo Ehelkoodii iyo Badhada Sportska Soomaaliya oo aan anigu ka mid ahay.
Waxaa tacsi taa la mid ah diraya guddoomiyaha ururka Kanava Mudane Cabdiqaadir Axmed Nuur(Hadaafoow) isagoo sheegay in uu ka xun yahay dhacadaasi foosha xun oo markasta la la beegsado dadka buslshadda wax tarka u ah, isagoo sheegay in geeridu xaq-tahay. Cabudiqaadir Hadaafoow waxa uu codsaday isagoo ku hadlaya magaca Sportska Soomaliya in Walaalahaa la dhintay La iska cafiyo ciddii deyn ku lehna ay noo soo sheegaan si aanu xaqaasi u bixinno , waxaa sidoo sidoo kale uu shacab weynaha Soomaaliyeed uu ka codsaday in la is cafiyo inta naftu nagu jirto. Anigu cid kasta waa iga cafis Anna cafis ayaan dalbanayaa ayuu ku soo koobay hadlkiisa.
Intaas ka dib, waxaa makarafoonka loogu yeeray mudane C/Casiis Goodax Barre oo ah xubin kamid ah Goos, isla markaana ah guddoomiye-ku-xigeenka xiriirka Kubadda koleyga Soomaliyeed. Mudane Cadbi-casiis Goodax Barre ayaa si aad ah uga tiiraan-yooday geerida masuuliyiinta. C/Casiis Goodax ayaa sheegay inuu Taleefan kula hadlay wax yar qaraxa ka hor mudane Wiish, saacado ka dibna loo soo sheegay geeridiisa taas oo naxdin weyn ku reebtay. Mudane Goodax ayaa tacsi u diray Goos, xiriirka kubadda cagta iyo qoysaskii ay ka baxeen masuuliyiintaas, isagoo busshada Soomaaliyeed ka codsaday in la iska cafiyo walaalahaas.
Cumar Max`ed Jaamac (Cumar Dhega-weyne) oo ahaa xog-hayihii hore ee xiriirka cayaaraha fudud xilligii beri-samaadka, ayaa ka sheekeeyay taariikhdii mudane Aadan Yabarow “Wiish”. Cumar ayaa sheegay inuu la soo shaqeeyay mudane Wiish oo ahaa nin taariiq mug weyn ku lahaa Sportiga Soomaaliyeed. Wiish wuxuu Sportigga ka soo bilaabay garsoore heerarka 3-aad, 2-aad iyo koowaad, ka dibna wuxuu noqday garsoore heer caalami ah.
Ka dib, wuxuu noqday xog-hayaha xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed iyo agaasimaha waaxda dhalinyarada. Ka dibna wuxuu noqday gudoomiyaha xiriirka kubadda koleyga soomaaliyeed oo uu mudo ahaa. Ka dib Wiish wuxuu noqday gudoomiye-ku-xigeenka Olyom-bikada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntiina wuxuu ahaa gudoomiyaha Olyom-bikada Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa taariikhda guddoomiyihii xiriirka Kubadda cagta ee Soomaaliyeed Marxuun Siciid Mugaanbe sharaxay mudane Max `ed Cali “Yaanyo” oo ahaa xog-hayihii hore ee xiriirka kubadda Laliska Soomalaiyeed. Yaanyo ayaa sheegay in Siciid Mugaanbe uu ku soo shaqeeyay marxalad adag oo nabad-gelyadu ay aad u xumeyd, isla markaana wakhti iyo maalba uu geliyay horumarinta Sportiga magaalada Muqdisho.
Dadkii kullanka baroor-diiqa iyo tacsida ka hadlay oo aad u badnaa waxaa kamid ahaa Asad Caalin (gudoomiyaha gollaha wax-garadka Soomaaliyeed ee wadanka Finland), Cabdullahi Cabdishukri Xuseen oo u hadlay bahda Sportigga Soomaalyieed ee wadanka Finland, Sheekh Maxamed Xasan , Nabadoon cusmar, Axmed Weheliye(Xiji) Cabdi Fitik (cayaaryahankii hore ee kooxda Waxool), Nabadoon Dalmar, Daahir Macallin Max`ud (xog-hayihii hore ee cayaaraha fudud bur-burkii ka dib), Mukhtaar Abiib (masuul arrimaha bulshadda ee magaalada Helsinki), Dr. Cumar (aqoonyahan Soomaaliyeed) iyo C/Qaadir Daadow, Cabdiqaadir Qooye iyo sidoo kale Bahda saxaafadda iyagoo
dhamaantod Illaahay u waydiinaya dadkii ku geeriyooday Qaraxaasi in uu Janno Faradoso ka waaribe Ehelkii ay ka tageena samir iyo iimaan uu ka siiyo
Gunaadka xafaladaasi baroor diiqada ah ayaa ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan iyadoo dad weynaha goobtaasi isugu yimid Inadhahood aad ka dheehan karto in ay ka xun yihiin Qarax-yadda is-daba jooga ah ee la la beegsanayo dadkii horseedka u noqon lahaa Bulshadda Soomaaliyeed.
Goordhow fillo sawiraada